Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Nchekwa onwe China Manufacturer
Nkọwa:Egwuregwu Kọmputa na-arụ ọrụ eletrik,Nkịtị na-ekpo ọkụ maka Ụlọ,Ụlọ ọrụ Ịgba Ọkụ Office
Home > Ngwaahịa > Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ > Ihe nkiri na-ekpo ọkụ maka ebe a na-ekpocha ụlọ > Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Nchekwa onwe
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Nchekwa onwe
A nkịtị oche na mpe mpe akwa ma ọ bụ ute bụ a table n'echebe-eji mgbe na-arụ ọrụ ma ga-eme ka mmebi desk.But anyị pụrụ iche oche na mpe mpe akwa nwere otu ọzọ ọrụ-heating.Our oche kpo oku na mpe mpe akwa a na-gụnyere anya infrared kpo oku film, a ọhụrụ ụdị nkà na ụzụ na ụlọ ọrụ ọkụ .
Ịzụta ihe ndị na-eme ka ahụ dị ike, nke na-adịgide adịgide ma jiri ike karịa ike karịa usoro omenala ndị kpo ọkụ. Site n'ichekwa ọnụego ọkụ na-agbanwe agbanwe, ọ nwere ike iwe ọkụ na nkeji ole na ole. N'ebe a na-ekpochapu ọkụ ọkụ, ọ nwere ike , gbasaa arịa ọbara, belata ahụrụ mgbu, mee ka ahụ mmadụ dịkwuo elu ma melite mmetụta nke usoro mgbasa ozi nke dị mma maka ahụ ike mmadụ. Ọ bụkwa gburugburu ebe obibi na-emepụta ihe ọ bụla na-emerụ ahụ, dịka ebili mmiri electromagnetic. Emepụtala anwụrụ ma ọ bụ mkpọtụ
A na-ejikarị ihe nkiri kpo oku infrared mee ihe n'akụkụ niile nke ndụ, dị ka ihe ọkụkụ na-arụ ọrụ na kpoo ọkụ eletrik nwere ike inye anyị obi ụtọ na ihu igwe oyi.
Ihe igwe kpochapu ihe omuma, bara uru maka ahuike.
Na-akwalite mgbasa ọbara, na-eme ka ọrụ ahụ dịkwuo ike.
Ọcha na-abanye n'ime anụ ahụ mmadụ ma hapụ ume, na-enye aka n'ịmepụta mkpụrụ ndụ na ihe oriri na ahụ anyị.
Nwee obi ụtọ n'oge ọrụ.
Eziri maka ụlọ ọrụ na ime ụlọ
Voltage ọsọ ọsọ AC 220V
Nkwụsị mbido 880-1075Ω, nkwụsi ike 968Ω
Ike 50W ± 10%
nsogbu nje ≥0.5Kg Ọ bụghị ịwụpụ
2. Ịgba chaa chaa na-edozi elu
Egwuregwu Kọmputa na-arụ ọrụ eletrik Nkịtị na-ekpo ọkụ maka Ụlọ Ụlọ ọrụ Ịgba Ọkụ Office Egwuregwu ọkụ na-arụ ọrụ na-adọkpụ Egwuregwu Ọkụ eletrik Egwuregwu ọkụ ọkụ na UL Egwuregwu Na-ekpo ọkụ na-akwụ ụgwọ Egwuregwu Ndị Na-ekpo ọkụ